Inkomfa yabezindaba uMark Rutte kunye noHugo de Jonge: uluntu oluyimitha enesiqingatha kunye nokuqaliswa kweapps: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	7 Aprili 2020	• 12 Comments
Ewe kunjalo! Sikhona. Bona ingqungquthela yeendaba ukusuka kuMark Rutte kunye noHugo de Jonge ngamanyathelo amatsha e-coronavirus. Kuhamba kanye njengoko bekulindelwe. Jonga nje into abathengise ngayo abantu ngohlobo oluhle loboya. Nantsi into esiya kuyifumana:
Umthombo kunye nokuqhakamshelana nokukhangela ngokusebenzisa ii-software kunye nokulinganisa iziphumo. "Oko kuthetha ukuba kufuneka silumke ngakumbi nangabucala"Utshilo uDe Jonge, kodwa leyo mhlawumbi yincwadi entsha kaGeorge Orwell ye"Kufuneka sibutshabalalise ubumfihlo bakho ngononophelo ngangokunokwenzeka, ukuze unqande kancinci kwaye ubone njengokwomdla wakho".
I-app enye ikhona ukunika bonke abafowunelwa bexesha elidlulileyo umqondiso "Unxibelelana nomntu osulelweyo"Kwaye"ujikeleze umntu obonakala ukuba wosulelekileMsgstr ". Olunye usetyenziso luvela kwi-OLVG ukukunceda ukuba ujonge wena kwaye uhlale unxibelelana nodokotela. Ewe, ndayixela kwangaphambili i-app yokuqala ngoMatshi 6 kwaye ndaphinda ndanika i-app yesibini ngoMatshi 17.
Xa ubuzwa ziintshatsheli zabagxeki be-sham ezivela kuluntu ukuba ngaba akufuneki ukophule ubumfihlo ukuze usebenzise iiaplikeshini ezinjalo, uRutten noDe Jonge baphendule ukuba ungayenza loo nto ngaphandle kwedatha; Umzekelo ngokusebenzisa izinyo eliluhlaza okwesibhakabhaka. Kodwa isiseko sedatha sazi njani ukuba ngubani okwommelwane wakho nokuba “wosulelekile”? Eyona nto ifuna ukuba idatha yabiwe, akunjalo? Ngaphandle kwalonto, oku kukhokelela kwinto esele siyayazi ukusuka ngexesha lokubhalwa kweBhayibhile. Yindala njengendlela eya eRoma: abantu abaneqhenqa banqatshelwa ekuhlaleni.
Ngaba ayiloxesha lokuthatha ngokungqongqo umthunywa? Isithunywa esaye saxela kwangaphambili malunga nobhubhane kunye nokuwa kwezoqoqosho ngo-2019 kwincwadi yakhe? Okanye ngaba ukhetha ukumamela oonodoli kwisuti enziwe ngombane enihlawulelweyo, ezakuthatha inkululeko yenu, kodwa nithathe inyathelo ngenyathelo? Ngaba abenzi bobuxoki xa beqhuba amaphulo kunyulo ngequbuliso banokulunga?
Xa ubuzwa ukuba ukusetyenziswa kwe-app kunyanzelekile, impendulo kaDe Jonge kukuba kusekude kakhulu ukuba uphendule (funda: Asifuni ukubonisa ngokukhawuleza ukuba sonke siyayazi le nto ixesha elide kwaye kufuneka sinyanzelise kwaye sikwenza oko kunyanzelekile), kodwa kwangaxeshanye inyathelo lanikezelwa ekugqibeleni.
Sibona isicwangciso sinyathelo ngamanyathelo kwaye siyazisa kwaye siyithambile, iboniswa njengokuvulwa "kobuhlakani" kwe "Intelligent Lockdown". Manene nani manenekazi, naziswa inyathelo ngenyathelo lenkqubo yenkuthazo eziswa ukuhlangulwa. Oko kuchazwe ngokuthe ngqo kwaye apha kule ndawo iminyaka Eli nqaku langaphambili Ndicacisa inyathelo ngenyathelo indlela edlalwa ngayo. Nceda ufunde kwakhona ngononophelo kwaye ujonge ividiyo engezantsi apho unokukubona okulindele. Intolongo ngaphandle kwemivalo!
Ngaba uyakhula ngokupakishwa kwaloo vidiyo? Yinkqubo yenkululeko yamapolisa yamapolisa ethi iboniswe njengesisombululo kwingxaki ezamkela ngokungabonakaliyo. Kodwa abantu abaninzi ngakumbi bayaphaphama baye kwisigqibo sokukhohlisa.
Ukusuka 'kwimitha enesiqingatha yoluntu' ukuya 'kuluntu olukhutshelwa ngaphandle' ... umgama wokuqala uyinyani; ukubandakanywa kulandela. Ngaphandle kwee -apps, uvavanyo kwaye okokugqibela isitofu sokuthintela, ukubandakanywa ekuthatheni inxaxheba kuluntu olulandelayo.
I-app yaseTshayina ilumkisa abantu abaneematyala kwindawo yakho
I-Alibaba app 'yeKhowudi yezeMpilo' eWuhan inceda ekuqinisekisweni kweendawo ezithile zelizwe
I-Coronavirus, uluntu olwenza lukhuni okanye luzuze ubuntu?
tags: enye enesiqingatha, app, apps, intlekele, intsholongwane ye-Corona, ukuqhelanisa, eziziimbalasane, UHugo omncinci, intelligente, tshixa, UMark Rutte, imitha, OLVG, nkomfa ye nkampani, kuluntu, zentlalo
Mindsupply wabhala wathi:
8 Aprili 2020 kwi-08: 01
UHarry makhulu wabhala wathi:
8 Aprili 2020 kwi-09: 33
Umfundi waseQanon. Lo mfazi ufuna ukusixelela ukuba intsholongwane iya kubangela imeko enzulu kunye nazo zonke iingwevu zopolitiko ukuba bohlwaywe. (Jonga ividiyo yakhe yangaphambili).
8 Aprili 2020 kwi-09: 35
Andiqondi ukuba kutheni abantu apha bezama ukuhenda abafundi ukuba babambe umgibe we-Q Anon. Yiyeke!
UValalarevolution wabhala wathi:
8 Aprili 2020 kwi-14: 27
U-Q ngugolidestein (1984)
Nabani na ongayiboni loo nto imbi ngaphezu kokugungqa kwegusha emva kukaRutte.
inyani wabhala wathi:
8 Aprili 2020 kwi-08: 17
Ewe ibali licacile. Kwiminyaka emininzi eyadlulayo ngengxelo eqhutywa nguMarcel Messing 'siyavuka' kwaye ndihlala ndibona ukuba eli libali lakhe, kodwa andiboni umyalezo wakhe
Ndiva intshukumo isenziwa. Ndiziva amandla amakhulu ukuvukela 'ngengqondo' 😉. Ngoku ndiyasazi isigaba sokucola. Kufuneka kuqala sithwale iintlungu ukuze sive eyona nto siyifunayo. Kwaye loo ntlungu yenkululeko iyamangalisa kwabaninzi. Ewe kunjalo kodwa loo chip ndifuna ukuba nakho ukuya kumdlalo bhanyabhanya omtsha (HAYI).
Sididekile! Kodwa njengoko uMartin esitsho: asinawo kwaphela umbono wamandla ethu kunye nobomi.
Hlala umva, uve ubumaphakade bakho kwaye usebenzise ubunyaba behlabathi njengebhodi yomsiko kwindalo yakho yantlandlolo.
Indoda evela emazantsi eNetherlands enosapho oluhle oluhle. Ukujonga kunye nokubuza ngobomi.
8 Aprili 2020 kwi-09: 27
Amapolisa anobuzwilakhe alawula nge-100% yezenzo zawo wonke umntu. Ngoku siziswe ngurhulumente olungileyo ofuna kuphela okuhle nabantu kwaye ufuna ukusikhusela. Abantu bakwimo enjalo ukuba boyike, inkululeko enyanzelekileyo yokuhamba eyamkelweyo ngenxa yokuba izisiwe iyimfuneko kwaye kukhuseleko lwethu ukuba baya kuthi ngokubanzi baqhwabele izandla isisombululo (ii -apps ezithi zisilandele) kwanokuba ayifuneki faka ngaphandle kokuthandabuza uya kufaka ngokukhawuleza.
Emva kwayo yonke loo nto, kukhuseleko lwethu kwaye ivela kurhulumente wethu onyanisekileyo kwaye nangaphezulu xa sizifaka singagcina ukubuyela endleleni (bacinga). Kwaye imfihlo kunye nenkululeko yeengxaki zokuhamba ngasemva kweenenekazi ezifundwe kakhulu (ngomnxeba 08-04-2020) isiqinisekisile ukuba ii -apps zikhuselekile ngokupheleleyo, ukuba yonke into yenziwe ukuba ingabeki ubomi bethu emngciphekweni.
Yindlela yokuqalisa inkqubo yeTshayina ukuqala ngathi, kunjalo konke ngendlela ethambileyo enobubele ukusikhusela. Oku kuya kuhamba ngakumbi nangakumbi kuba ngokuqinisekileyo kuya kuhlala kuvela ukuvela okutsha kwe-corona (okanye olunye ugqabhuko lwentsholongwane). Kwaye kuvela ukuba eziapps (kunye nezinye iinkqubo ezilandelayo ezilandelayo kunye neminye imithetho kunye neetekhnoloji ukusifumana phantsi kolawulo olupheleleyo) zingasetyenziswa kakuhle ekuphuculeni utshintsho lwemozulu kunye nokuziphatha kwabantu okuyimfuneko kutshintsho lwemozulu. iyakwazi ukubeka esweni.
Kwaye oku kubandakanya isilinganiselo sedigital dot yedijithali apho wonke umntu one-ID2020 enokulandelelwa. Apho kunokubonwa ukuba ulufumene ugonyo oluyimfuneko lwe-covid-19. Olunye ugonyo oluya kufuneka kamva. Uya kuyidinga le tattoo ukuba uneshishini okanye ufuna ukwenza ishishini kuba kwixesha elifutshane le tattoo iyakufuneka kulo lonke ushishino lweshishini.
Bendingayi kumangaliswa kukubona loo manqaku e-quantum dot tattoo ephumela kulo nyaka. Mhlawumbi ayinyanzelekanga kwasekuqaleni, kodwa ngenxa yokuba uya kuxhomekeka ngakumbi kuyo, umzekelo, ukuba ufuna ukuhamba uye kukhangela ukuba unalo naluphi na ugonyo, ukuba awunayo loo tattoo uya kuthi wenqatshelwe kwindawo yokujonga ithikithi okanye nge-elektroniki. Kwaye kwithuba elincinci, kuba ichaphaza lidibene nayo yonke into eluntwini, awuyi kukwazi ukuyenza ngaphandle kwayo.
UMartin: iza kuphela ût know du sein unayo
8 Aprili 2020 kwi-11: 50
Intsholongwane "esongela ubomi" ngoku inokuthi idluliselwe ngesenzo esilula esithi "ukuthetha" kwakhona ngumntu ongenazo iimpawu. Ukuthetha kuthi cwaka… Ndifuna ukuphuma apha!
8 Aprili 2020 kwi-13: 21
Yintoni elindele i-Netherlands:
8 Aprili 2020 kwi-20: 03
kuhle ezo ziapps ziyeza zithi jpg.
I-Thiel, uPeter (e-USA), uMongameli, uTheel Capital
USchmidt, uEric E. (eUSA), owayesakuba lilungu le-CEO kunye noSihlalo, iGoogle LLC
8 Aprili 2020 kwi-20: 05
10 Aprili 2020 kwi-14: 39
Uhlaselo sele luqalile eSpain ... Lude kangakanani ngaphambi kokuba i-Netherlands ilandele? Ewe, inokuba sele iqhubeka, kodwa ukuba imidiya ayibonisi, ngekhe siyibone.
10 Aprili 2020 kwi-15: 23
Zonwabele ngaphandle kwendalo. Kulungile oko kumzimba wakho wokuzikhusela. Ngelixa kunokwenzeka ngaphambi kokuba kuqhume i-apocalypse ye-zombie. Iintsholongwane azinakudluliselwa nakweyiphi na indlela njengoko uloyiko lwee-porn ezikwenza ukuba ukholelwe. Thatha isohlwayo, ngubani onokuphinda ahlawule?
« ICorona Crisis: Ingathabatha ukuya kwiminyaka emi-2 ukuya kweli-3 ukuphuma kokuvalelwa ngaphandle kokuba ulandelele kwangoko kunye neapps
UDavid Icke eLondon yangempela yevidiyo: Ngaba i-Icke yeyokwenyani okanye yeyokwenyani okanye ngaba inyani idityaniswe nomgibe we-booby? »
Utyelelo lulonke: 2.534.280